ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မှာ မိသားစုဆိုတာကတော့ ရှိမှာပဲလေ – Nyang Media
Established in May, 1, 2017.
နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းက သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် လက်နက်ကိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်လာတတ်တယ်။ အဲဒီလိုအသိမျိုးဝင်သွားရင် နိုင်ငံလည်း ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ချင်ရင် ဒီအမြင်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ . . .
AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်၏ ညီမနှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့ကို အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့က မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်၌ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေကို အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားခြင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အောက်တိုဘာ (၂၄)၊ ၂၀၁၉၊ ရန်ကုန်
ငြမ်း – AA စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ ညီမနဲ့ သူ့အမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေရှုထောင့်ကနေ ဝေဖန်သုံးသပ်ကြတာတွေရှိလာတော့ ဒီကိစ္စအပေါ် ဒေါ်ခင်စောဝေရဲ့အမြင်ကိုသိပါရစေ။
DKSW – ကျမတို့လည်း အဲဒီကိစ္စကိုကြားတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်မဟုတ်ခင်တုန်းက နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုရင် သူ့မိသားစုကိုရော၊ သူနဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုရော ဖမ်းခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလိုပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ခေတ်မှာတော့ ဒါမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ မိသားစုတွေလည်း စိုးရိမ်မှာ အမှန်ပဲ။ ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရ တရားဝင်ချပြသင့်တယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
ငြမ်း – ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာ စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မသုံးသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေလည်း ရှိနေတော့ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်ပါသလဲ။
DKSW – ကျမတို့က NLD ပါတီကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်လေ။ နောက်တစ်ခါ တိုင်းရင်းသားပါတီေတွေအပါအဝင် ပြည်သူလူထုကလည်း အပြောင်းအလဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့။ စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်က စနစ်ဆိုးတွေကိုလည်း ပြောင်းလဲစေချင်တာပေါ့။ အခုဆို ဒီမိုကရေစီသက်တမ်းက ကိုးနှစ်ကျော်လာပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီကတော့ အပြည့်အဝမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ အကုန်လုံးဝေဖန်နေကြတယ်။ ကျမတို့ရင်ထဲမှာလည်း ဒီလိုပဲခံစားနေရတယ်။ နောက် ကျမတို့ဒေသမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ အစိုးရပိုင်းက ဒီနေ့အချိန်ထိပေါ့နော်၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ သနားကြင်နာတဲ့ပုံစံမဟုတ်တောင်မှ အားပေးစကားလောက်ကိုတောင် တစ်ခုမှပြောထားတာမရှိဘူး။ ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေကြတယ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာ စာနာစိတ်နဲ့ အားပေးမှုတောင်မရှိခဲ့ဘူး။ ဆိုတော့ တကယ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ အများကြီးတာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်။ အခုဆို တိုက်ပွဲတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေကြေဒုက္ခရောက်ကြတယ်၊ တဖက်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကိုပြောနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူလူထုတင်လိုက်တဲ့ အစိုးရကတော့ လုံးဝကိုအသံတိတ်နေသလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ဆို အဲဒီအချက်ကို ထောက်ပြချင်တယ်။ ၂၀၁၅ မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ ပြည်သူက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့လို့ ပြည်သူ့အစိုးရတော့ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေမျှော်မှန်းထားသလောက် ပြည်သူအပေါ်စာနာမှုတွေ၊ တိုင်းပြည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတော့ အများကြီးမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုတော့ ကျမတို့တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို ကြည့်ပါ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက အရမ်းအားနည်းနေတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ သူတို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ချိန်က ပြောခဲ့တာတွေကို အားလုံးသိကြပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် လုပ်မယ်တို့၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် လုပ်မယ်တို့၊ နောက်ပြီး ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေအောင် လုပ်မယ်တို့ ပြောပြီးမဲဆွယ်ခဲ့ကြတာလေ။ ခုအချိန်ထိတော့ အဲဒီလိုပြောခဲ့တာတွေ ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာ အားလုံးကလည်း ဝေဖန်နေကြတာတွေရှိလာပြီ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် ပိုဆိုးတာပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ကတော့ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ ပြည်သူအပေါ်မှာ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ အုပ်ချုပ်စေချင်တယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကူညီစေချင်တယ်။ ဆိုတော့ အခုထိ ကျမတို့မျှော်မှန်းထားခဲ့သလိုတော့ မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့။
ငြမ်း – အခုလို AA စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ ညီမနဲ့ သူ့အမျိုးသားကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီး ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။
DKSW – အဲဒါကတော့ ခုနက ကျမပြောသလိုပဲပေါ့။ ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင် မိသားစုတွေတိုင်းက စိတ်ပူမှာပဲပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့က ဟိုဘက်မှာလုပ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် အခုအဖမ်းခံရတဲ့လူတွေက သူတို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ၊ သူတို့ ဘယ်လိုပတ်သက်ပြီး ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ၊ အဲဒါတွေကိုတော့ အဖြေရှာဖို့လိုတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မှာ မိသားစုဆိုတာကတော့ ရှိမှာပဲလေ။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေတော့ အများကြီးရှိမှာပဲ။ အဲဒီလိုတမ်းသာ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေ အကုန်လုံးကို အပြစ်ရှိရှိမရှိရှိ ဖမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူး။ ဒီမိုကရေစီစနစ်အရလည်း မကိုက်ညီဘူးလေ။ ကဲ အခုဖမ်းတယ်ဆိုရင် ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်း တော်တော်လေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်တာပေါ့။ ငါတို့ကို ဘယ်တော့လာဖမ်းမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ကြမှာပဲ။ အဲဒီတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ် လာမှာပေါ့။ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင် တရားဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ ခုနကပြောသလို ဖမ်းသွားတယ်၊ ဘာကြောင့်ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာလည်းမသိရ၊ ဘယ်မှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာလည်းမသိရ၊ မိသားစုတွေကိုလည်းတွေ့ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ တကယ်ဆို ဖမ်းတယ်ဆိုရင်လည်း ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်၊ ဘာအပြစ်ရှိတယ် ဆိုတာကို တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်သင့်တာပေါ့။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမှုက အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုရမယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဟိုဘက်ကတစ်ယောက်ကြောင့် ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ဖမ်းတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျမထင်တယ်။ ဒါတွေဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့လမ်းမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်း – အခုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့ကိစ္စမှာ ဥပဒေအရ ဖမ်းရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်တောင် အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကို ဥပဒေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ ခံစားခွင့်တွေ ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေရှိတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကို ဥပဒေအရခံစားခွင့်တွေမပေးဘဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် လက်ရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့ အချက်တွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲ။
DKSW – ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကို ကျမတို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းတောင်းဆိုနေတာရှိသလို တိုင်းရင်းသားအများစုကလည်း ဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ သွားမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့တော့ အရေးကြီးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရဘဲနဲ့တော့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ပြည်သူ့အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်မယ် ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို သတိပြုသင့်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အရင်က ပြောခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးတို့၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးတို့ဆိုတာတွေ။ အခုက အမျိုသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့အသံ ပျောက်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုဆက်သွားကြမလဲ။ ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိဘဲ အခုပြောနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတာ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှပဲ တည်ဆောက်လို့ရမှာလေ။ အခုတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ၊ ကျမဆိုရခိုင်ပေါ့၊ ကျမတို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရင်ထဲစိတ်ထဲမှာ အခုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရ လုပ်နေတာတွေဟာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အလှမ်းဝေးလာတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်။
ငြမ်း – မေးခွန်းက အခုလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တည်ဆောက်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်သလဲဆိုတာပါ။
DKSW – သူတို့ ဒီလိုမျိုးလုပ်နေရင်တော့ ရှေ့လျောက် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသွားမယ့်လမ်းကို ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့။ ဒီလိုသာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့ သူတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ သွေဖယ်နေပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံရေးဘောင်တွေကျဉ်းလာတော့ စစ်ဘောင်တွေပိုကျယ်လာတာပေါ့နော်။ ဒါက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်လည်းမကောင်းဘူး။ နောက် ကျမတို့ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင် ရွာတွေတော်တော်များများမှာ လူငယ်လူရွယ်တွေ မရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်။ တချို့ လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်း အမုန်းတရားတွေများလာကြတယ်။ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းက သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် လက်နက်ကိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်လာတတ်တယ်။ အဲဒီလိုအသိမျိုးဝင်သွားရင် နိုင်ငံလည်း ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ချင်ရင် ဒီအမြင်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘယ်လိုပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။
ငြမ်း – လက်ရှိပြည်ထောင်စုအစိုးရအပေါ် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုက ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ သုံးသပ်ပေးပါဦး။
DKSW – ကျမတို့ကတော့ လက်ရှိအစိုးရကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကတည်းက အများကြီးယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း NLD ပါတီကို လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာပါလာဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ရောက်လာရင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ သူတို့က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပေါ့။ အခုတော့ အစိုးရဖြစ်သွားပြီ။ အစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့ ကျမတို့ ဆက်မျှော်လင့်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပုဒ်မ ၂၆၁ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သူတို့နဲ့အမြင်မတူတာတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တာတွေရှိတယ်။ အခုဆို တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ သူတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေကို လက်တွဲခေါ်ဖို့စိတ်မကူးဘူးလို့ ယူဆလာကြတယ်။ အခုဆို ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီစုံအနိုင်ရပြီး ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ကို တိုင်းရင်းသားတွေက မျှော်လင့်နေကြပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘက်ကလူကြီးကိုယ်တိုင်က ဒီလိုညွှန့်ပေါင်းအစိုးရမျိုးကို မလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့ အသံတွေထွက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေက တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတွေရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေက ဒီအချိန်မှာ သူတို့ကို အားကိုးမရဘူးဆိုရင် ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားပါတီအချင်းချင်းပေါင်းပြီး ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်အောင် ကြိုးစားကြမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မျိုး ရှိလာကြပြီပေါ့နော်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဘယ်ပါတီအနိုင်ရမလဲဆိုတာ ခုအချိန်မှာပြောလို့တော့ မရသေးဘူးပေါ့။ နောက် ကျမတို့ ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာကလည်း စစ်ဒဏ်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ နေရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ ဆိုတော့ ၂၀၂၀ ရလဒ်ကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ကျမတို့က ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားရှိဖို့၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်အကျိုးစီးပွားရှိဖို့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအေးချမ်းဖို့၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်အေးချမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ကျမတို့ထင်ထားတာထက် အများကြီးနည်းတယ်။ နည်းတဲ့အပြင် လုံးဝကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသလို ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီအတွက်တော့ ကျမတို့ကစိတ်မကောင်းပါဘူး။
ငြမ်း – ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Photo – Khin Saw Wai facebook
ပစ်သတ်ခံရတဲ့ ဆရာတော်က ပရဟိတစိတ်အပြည့်နဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးပါ
လမ်းဘေးက ပေါက်လွှတ်ပဲစား ပုံစံမျိုး ပြောပုံဆိုပုံဟာ ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့တင် မဟုတ်ဘူး။
၁၃ လမ်း (အောက်) လမ်းမတော်မြို့နယ် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၇၆)ကြိမ်မြောက် ကာတွန်းမီးထွန်းပွဲတော်
မြန်မာအသင်း အိန္ဒိယကို သရေကစားပြီး ၂၀၂၀ အိုလံပစ် တတိယအဆင့်တက်
ယုဇန ရဲ့ ရေဒုက္ခ